> Electronics>DeLonghi EC 270 Coffee Machine ( black )
Reference EC 270
Easy to use. Easy to clean. Additional shipping fees will be charged.
အလွယ်တကူ Cappuccinoပြုလုပ်နိုင်သော စနစ်ပါဝင်ခြင်း။ အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။
De'Longhi's coffee maker EC 270 can make the perfect life for all coffee lovers.This appliance can be used either with ground coffee or with the "Easy Serving Espresso" - pods.For Cappuccino lovers, this machinecan also makeCappuccinothat combines steam, air andmilk for the best taste.There isaremovable drip tray for easy cleaning.Make your life and your family's life more happier and easier with best coffee everyday.*1 year service warranty*
ကော်ဖီ နှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ EC 270 ကော်ဖီစက်သည် ကော်ဖီဖျော်ရာတွင် နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီမှုန့် (သို့) တစ်ခါသုံး Espresso ကော်ဖီ အမှုန့်ထုတ်ကိုလည်း အသုံးပြု၍ လွယ်ကူစွာ ဖျော်နိုင်ပါသည်။ Cappuccino ကော်ဖီကိုမှ နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံးလိုသူများ အတွက် နို့နှင့် အချိုးကျကျ ဖျော်စပ် ပေးနိုင်မည့် အကောင်းဆုံး Cappuccino ကော်ဖီတစ်ခွက် ရရှိရန် De'Longhi ကော်ဖီဖျော်စက်က ကူညီ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကော်ဖီ အမှုန့်စစ် ဇကာကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် တစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်စေ၊ မိသားစု ဘ၀တွင်ဖြစ်စေ အချိန်ကုန်သက်သာကာ လူမပင်ပန်းဘဲ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကော်ဖီများ သောက်သုံးရင်း ပိုမို စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။